नागरिक न्युजमा प्रकाशित,१७ जेठ, काठमाडौं ।
महानगरीय प्रहरी परिसरले काठमाडौँका विभिन्न होटल, डान्सबार, रेष्टुरेन्ट र रोधीघरबाट ३९ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। परिसरअन्तर्गत रहेका वृत्त र प्रभागको टोलीले माइती नेपाल र सिबिन नेपालको सहकार्यमा गोँगबु, ठमेल, कोटेश्वर, बानेश्वर, बालाजु लगायतका होटल र डान्स रेष्टुरेन्टहरुमा नाबालक केटीलाई जबर्जस्ती काम लगाउने गरेको सूचनाका आधारमा बुधबार राति छापा मारेर बालिकाको उद्धार गरेको हो।
गुल्मीको वाग्लामा बालिका मृत फेला
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,१७ जेठ, गुल्मी ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउपालिका ७ वाग्लामा एक बालिक मृत अबस्थामा फेला परेकी छ्न। अन्दाजी ११ वर्षीया बालिका सडेको अबस्थामा बुधबार स्थानीयले ढोडको पहिरोमा फेला पारेको पुर्कोट इलाका प्रहरी कार्यालयका सई अशोक श्रीवास्तबले बताए ।
चट्याङ लागेर दुइ बालबालिकासहित ३ को मृत्यु
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१७ जेठ, उदयपुर ।
लिम्चुङबुङ्ग गाउँपालिका–२ ताम्लिछामा बिहीबार साँझ चट्याङले लागेर दुई बालबालिकासहित ३ को मृत्यु भएको छ ।हावाहुरी र वर्षात्‌सँगै परेको चट्याङ लागेर कृष्णबहादुर भुजेलको छोरी ८ वर्षीया विष्णुमाया भुजेल, खडु भुजेलको ११ वर्षीय छोरा कौशल भूजेल र ६३ वर्षीय धनप्रताप राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
नागरिक न्युजमा प्रकाशित,१७ जेठ, रुकुम पश्चिम ।
जिल्लाका दुई बालिका बलात्कृत भएकी छिन्। सानीभेरी गाउँपालिका र आठबीसकोट गाउँपालिकामा बालिका बलात्कृत भएकी हुन्। सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. ६ की १७ बर्षिया बालिका कल्पना (नाम परिवर्तित) सामूहिक बलात्कृत भएकी छिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सोही गाउँपालिका वडा नं. ५ का १८ बर्षीय विशाल केसी र धनसिंह वाँठा मगरले जबरजस्ती बलात्कार गरेको प्रहरीले बताएको छ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१७ जेठ, रुकुम पश्चिम ।
धमाधम विद्यार्थी विरामी हुन थालेपछि जनएकता आधारभूत विद्यालय बन्द गरिएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिका–१, लागिममा रहेको विद्यालयमा जेष्ठ १३ गतेदेखि विद्यार्थी विरामी हुन थालेका थिए ।
सर्पको टोकाइले किशोरीको मृत्यु
थाहा खबरमा प्रकाशित,१७ जेठ, लहान ।
विषालु सर्पको टोकाइबाट सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–६, भोक्राहामा एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। कमला नदीको बगरमा तारबुजा टिप्न जाँदा विषालु सर्पले टोक्दा स्थानीय ततरा मियाँकी छोरी १६ वर्षीया अमिदा खातुनको मृत्यु भएको कल्याणपुर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोतिबुल राइनले जानकारी दिए।
८ हजार बालबालिका क्लबमा समेटिँदै
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१६ जेठ, धनकुटा ।
साना बालबालिका लामबद्ध थिए । उनीहरू आफ्ना नेतृत्व चयन गर्न उत्साही देखिन्थे । ‘को भन्दा को कम’ भने झैं बालबालिकाबीच नेतृत्वको होडबाजी नै चलिरहेको थियो ।
कालीगण्डकीमा पौडी खेल्दा बालक बेपत्ता
न्युज २४ मा प्रकाशित,१६ जेठ, रामपुर ।
कालीगण्डकीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक बालक बेपत्ता भएका छन् ।रामपुर नगरपालिका–४ देवीस्थान बस्ने ११ वर्षीय मिलन नेपाली मंगलबार दिउँसो कालीगण्डकीस्थित कोप्चेघाटमा साथीहरुसँगै पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक एनबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
बलात्कार आरोपमा बैंक कर्मचारी पक्राउ
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१६ जेठ, धनुषा ।
बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका– २४ की १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै बैंकका मेकानिक विजयकुमार न्यौपाने पक्राउ परेका हुन् ।
बालहिंसाका उजुरी बढे
कान्तिपुरमा प्रकाशित,१६ जेठ, काठमाडौं ।
बालकालिकाको आपतकालीन उद्धारका लागि सञ्चालित बालहेल्पलाइनमा पछिल्लो समय उजुरीका चाप लागेका छन् । केन्द्रीय बालकल्याण समिति, सिविन नेपाल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालित हुँदै आएको हेल्पलाइन २० वर्ष पुरानो हो ।